देशभर थप १ हजार ९ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ११ जनाको मृत्यु – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७७ कार्तिक १२ गते ७:१३ मा प्रकाशित
देशभर थप १ हजार ९ सय ५४ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको नियमित जानकारीका क्रममा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ८ हजार २ सय ४८ जनाको पीसीआर परिक्षण गरिएकोमा १ हजार ९ सय ५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या ३९ हजार ६ सय ४३ रहेको छ । जसमा संस्थागत आइसोलेशनमा ७ हजार ७ सय ९ र होम आइसोलेशनमा ३१ हजार ९ सय ३४ जना रहेका छन् ।
यस्तै गत २४ घण्टामा थप २ हजार ९८१ जनाले कोरोना जितेका छन् । यससँगै देशभर कोरोना को उपचारपछि निको हुनेको संख्या जित्नेको कुल संख्या १ लाख २१ हजार ८२४ पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ सय ८७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब दैनिक कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङ नगर्ने भएको छ । दशैंका समयमा केही दिन रोकिएको प्रेस ब्रिफिङ आज भएको थियो । भोलि बिहीबारदेखि भने दैनिक ब्रिफिङ नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब सातामा दुई दिन आइतबार र बुधबार कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङ हुनेछ । अरु दिनको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट, भाइबर ग्रुप र सामाजिक सञ्जालमा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।